Netizen Report: Manamafy ny Fanarahamaso Ny Fampiharana Ny Lalàna (Sy Ny Teknolojia) Ilay Lalàna Vaovao Momba Ny Fiarovana Amin’ny Aterineto Any Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2016 17:41 GMT
Ny afovoan-tanànan'i Shanghai. Sary navoaka ho an'ny sehatra ho an'ny daholobe.
Topimaso iraisam-pirenena momba ireo fanamby, ireo fandresena ary ireo fironana vao nipoitra momba ny zo an-tserasera manerana izao tontolo izao no atolotry ny Netizen Report-n'ny Global Voices Advocacy.
Hanakana ny tsy hiparitahan'ny vaovao izay manimba ny “Voninahi-pirenena” , ” manakorontana ny filaminana ara-toekarena na sosialy”, na mikendry ny ” handravàna ny rafitra sosialista” ataon'ireo mpisera amin'ny aterineto ilay lalàna vaovao momba ny fiarovana amin'ny aterineto any Shina. Hampanara-penitra ireo fitsipika niparitadritaka nifehy ny aterineto teo aloha sy ireo fomba fanao tsy manam-paharoan'ireo sampan-draharahan'ny governemanta, ary hampivelatra ny fahefana tanàn'ny Fitantànana ny Aterineto ato amin'ny firenena izany, manatanteraka sy mampihatra ny politika ho an'ny aterineto ny sampana fototra avy amin'ny governemanta.
Takian'ilay lalàna ireo orinasa mpikirakira aterineto any Shina mba hanamarina ny momba ireo mpisera no sady hitahiry ny ” mombamomba ireo mpisera ireo sy ireo angon-drakitra hafa manan-danja momba ny fandraharahàna”, mazava ho azy fa lasa tsy ara-dalàna ny tsy fitononana anarana. Voatsikera noho ny fanitsakitsahany ny zon'ny mpisera amin'ny fahalalahan'ny fanehoankevitra, ny fiainana manokana sy ny tsy filazana anarana, ary noho ny fametrahany fepetra hentitra amin'ireo orinasa miasa eto amin'ny firenena ilay lalàna.
Amin'ilay toa ohatra fampiharana ny lalàna momba ny heloka bevava atao amin'ny aterineto, dia vao tsy ela akory izay ilay orinasa misahana ny fanarahamaso Kryptowire no nahafantatra karazana finday modely Android marobe izay misy rindrambaiko voapetraka maharitra mialoha ( rindrambaikon'ny orinasa mpamokatra / firmware) izay manangona ireo angon-drakitra manokana saropady, isan'izany ny hafatra an-tsoratra, ny famantarana toerana, ny lisitr'ireo olona fiantso, sy ny rakitry ny antso isan'andro ary mandefa izany any amin'ny lohamilina iray any Shangai, amin'ny famoronana ny varavarana ambadika hidirana amin'ny angon-drakitry ny mpisera ho an'ireo mpampihatra ny lalàna sy ireo manampahefana hafa.
Afaha mandingana ny endriky ny fanomezan-dàlan'ny Android ilay “code”, tsy ilàna ny faneken'ny mpisera. Mety hamela izay rehetra liana amin'ny angon-drakitry ny mpampiasa finday iray — manomboka amin'ireo tompon'andraikitry ny governemanta ka hatramin'ireo mpijirika ratsy fanahy— hanatanteraka baiko avy lavitra miaraka amin'ireo zo manokana, eny fa hatramin'ny famerenana mandamina ny rindrambaikon'ilay fitaovana aza izany.
Ankoatry ny fanarahamaso ny angon-drakitra manokana araka izay takian'ny lalàna, dia matetika ireo Shinoa mpampiasa ny finday Android no misintona ireo fampiharana Android any amin'ny tsenanà fampiharana Android tsy ofisialy hatramin'ny nialàn'ny Google tany Shina tamin'ny 2010. Henika fampiharana misy rindrambaiko manimba izay mety hangalatra sy hanakorontana ny angon-drakitra manokana ireo tsenanà Android ireo.
Nolazain'ilay orinasa ADUPS izay manamboatra ilay firmware fa hanampy ireo mpanamboatra finday amin'ny “famantarana ireo hafatra tsy ilaina” sy amin'ny “fanatsarana ny traikefan'ny finday” ilay rindrambaiko. Namidin'ny Amazon sy BestBuy mpaninjara amin'ny aterinetoavy any Etazonia ireo fitaovana ireo.
Mandritra izany, tamin'ity herinandro ity dia nisy ny tatitra hoe nanamboatra sora-miafina afaka mamono ireo hafatra alefan'ireo mpisera, miainga avy amin'ny faritra misy azy, ny Facebook. Voalaza fa ilay orinasa dia manamboatra fitaovana ho atolotra ilay kilasy fahatelo any Shina ho famenon'ireo zavatra takiana mba hahafahana miasa ao amin'ilay firenena. Izao no nambaran'ny New York Times momba ilay tatitra, ” ity tetikasa ity dia manazava ny haben'izay mety ho fahavononan'ny Facebook hampandefitra ny iray amin'ireo iraka fototry ny fanambaràny, ‘ hampisokatra kokoa sy hampifandray izao tontolo izao,’ mba ahafahana miditra aminà tsena misy Shinoa 1,4 lavitrisa. Ho hita eo izay ho fiantraikan'ny lalàna momba ny fiarovana amin'ny aterineto ho an'ny fisian'ny Facebook any Shina.
Notapahan'i Gambia ny aterineto noho ilay fifidianana manantantara
Ny hariva nialohan'ny fifidianana, izay nialohavan'ny fampielezankevitra nahery vaika, dia notapahan'ireo manam-pahefana ny aterineto sy ireo tambajotranà antso an-tariby sasany, hoy ny mpanao gazety iray any an-toerana. Ny mpifaninana tsy miankina, Adama Barrow, tohanan'ny fiaraha-mientan'ireo antoko politika fito fara-fahakeliny, miaraka amin'i Mamma Kandeh-n'ny Kongresy Demokratikan'i Gambia (GDC) vao nijoro, no nifanandrina tamin'i Jammeh tao anatin'iza nolazain'ny mpandalina hoe ny fifidianana lehibe indrindra tao anatin'ny roapolo taona mahery. Nozarain'i Kemo Cham, Gambiana mpanao gazety miaina any an-tsesitany, tao amin'ny Facebook ny momba ilay fanapahana.
Mazava be, efa resy izy, na dia mbola tsy voalaza aza ny voka-pifidianana. Voalaza fa nampiharin'i Yaya Jammeh ny fepetra fanao amin'ny tany misy hotakotaka, notapahany ora vitsy foana mialoha ny fifidianana ny aterineto, ny antso iraisam-pirenena, eny hatramin'ny famatsiana herinaratra aza. Fantany fa ho resy izy amin'ny fifidianana malalaka sy marina.
Nosamborina ny mpiaro zon'olombelona sady mpamorona haban-tranonkala any Shina
Voasambotra ilay mpamorona ny tranonkalam-baovaon'ny olom-pirenena Shinoa rehefa nosavain'ny mpitandro filaminana ny tranony. Huang Qi no mpiaro zon'olombelona malaza fahatelo tsy hita na nogadraina tato anatin'ny tapabolana, taorian'ny nanjavonan'ilay mpisolovava Jiang Tianyong sy ilay olom-pirenena mpanao gazety Liu Feiyue, izay inoan'ireo mpikatroka mafana fo fa notanana any amin'ny fonjakelin'ny mpitandro filaminana.
Nanao bemidina tao an-tranon'ilay mpamorona ny 64 Tianwang, nanao ny fisavàna izany sy nisambotra an'i Huang ireo mpitandro filaminana any Sichuan ny alin'ny Alatsinainy 28 Nov, araka ny fitantaran'ilay mpikatroka mafana fo tao amin'ny Radio Free Asia (RFA), onjam-peo tohanan'i Etazonia. Nanana taratasy fahazoana misava ry zareo, hoy izy.
Tranonkalam-baovao tsy miankina izay mizara lahatsoratra sy vaovao momba ny tranganà zon'olombelona any Shina, ny Tianwang, isan'izany ny fisamborana ataon'ny mpitandro filaminana, ny fandravàna an-terisetra, ny hetsika fanangonan-tsonia sy ny hetsi-panoherana. Vao nahazo ny Lokan'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana gazety avy amin'ny Mpitatitra Tsy Voafetran'ny Sisintany (RSF) 2016 izy. Mpanao gazety sivy izay nandray anjara tao amin'io tranonkala io no voasambotra, ka dimy no navoaka rehefa nandoa onitra, araka ny voalazan'ny Tianwang.
Nampangaina ho ‘namporisika fankahalàna’ tamin'ireo bitsika fanoherana ilay Bahraini mpikatroka mafana fo
Hussain Radhi, bahraini mpiaro zon'olombelona, dia voampanga ho nibitsika marobe ” namporisika ny fankahalàna ny fanjakana, nandrahona ny filaminam-bahoaka ary nanaparitaka vaovao tsy marina” sy noho ny famerenana bitsika natao handraiketana ireo hetsi-panoherana tany amin'ireo tanàna kelin'i Bahraini sy ny fanafoanan'ny mpitandro filaminana azy ireny. Nolavin'i Radhi ireo fiampangana azy.
Raràn'ny PM Libane ilay mpaka sary ara-politika
Vao noraràna vao haingana i Hussein Baydoun, mpanao gazety mpaka sary, tsy hahazo mankany amin'ny tranon'ny Praiminisitra Libane Saad Hariri, izay matetika toerana fanaovana fivoriana sy hetsika hafa. i Baydoun, miaraka miasa amin'ny The New Arab dia malaza amin'ny fanaovana ireo sary manadihady ny hetsi-panoherana any Libanona, isan'ireny ny hetsi-panoherana ‘maimbo ianareo’ nanohitra ny kolikoly nataon'ny governemanta tamin'ny 2015 nisongadina taminà vaovao maro.
Fitsaràna Breziliana mamokaa didy manohitra ny ‘Zo hohadinoina’
Niaraka nanapaka kevitra ny Fitsarana Ambony any Brezila (STJ) fa ” tsy tokony ampiharina ao amin'ny Google ” na ireo milina fikarohana hafa ny ” zo hohadinoina”, ny antony dia satria mety hanome andraikitra be loatra ireo milina ireo izany, ka mahatonga azy ireo ho sivana dizitaly. Izany fanapahankevitra izany dia mifanohitra amin'ny an'ny Fitsarana ao amin'ny Vondrona Eoropeana izay nilaza tamin'ny 2014 fa andraikitra manontolon'ny milina fikarohana ny mamafa ny voka-pikarohana rehefa sahy milaza ny olona iray fa manan-jo hanala izay ‘ tranainy na tsy misy ilàna azy ‘ amin'ny mombamomba azy ao amin'ilay valim-pikarohana. Niadiana hevitra lalina tao amin'ny Vondrona Eoropeana sy tany amin'ny firenena hafa io didy io, indrindra fa amin'ny tranga hoe niezaka ireo olom-panjakana ambony hamafa ny mombamomba azy ao amin'ilay valim-pikarohana mba hanatsaràna ny sariny imasom-bahoaka.
Fikarohana Vaovao (rohy amin'ny teny Anglisy)
Sivana Miaraka amin'ny Vanimpotoana : Ambangovangony Amin'ny Angon-Drakitra Nifandrimbonana momba ny Sivana Atao Amin'ny Haino Aman-Jery Sosialy - OnlineCensorship.org
Fahalalahana ao Amin'ny Aterineto 2016 - Freedom House
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Oiwan Lam, Weiping Li, Elizabeth Rivera, Taisa Sganzerla ary Sarah Myers West.